Anwatin Community by Ari K
Spanish / Español: Anwatin le da la bienvenida a TODAS las familias
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweeynayno ardauydeena iyo qoysaskooda sanad dugsiyeedka cusub. Waxaan diyaar u nahay inaan u diyaarino ardaydeena jawi deegaan kobcinaaya waxbarashadooda. Mudnaanta ugu weyn waa, hadaan nahay barayaasha iyo shaqaalaha dugsiyada, inaan badbaadino fayo-qabka iyo dhowrsanaanta ardaydeena .
Inta lagu jiro todobaadka ugu horeeya iskuulada iyo dhammaan sanadka oo dhan, macalimiinta iyo shaqaalaha waxay sameeyn doonaan cilaaqaad wanaagsan iyo is aammin ardayda iyo qoysaskoodaba. Waxaan si feejignaan iyo fir-fircooni ula soconaynaa imaatinka ardaydeena iyo dhammaan ka qeyb-qaadashadooda howlaha iskuulka.Shaqaalaha Dugsiyada dadweynaha Minneapolis waxay ku dhaqmi doonaan sinaanta iyo in dhaqamadu aysan midna midka kale ka hooseeynin, shaqaaluhu waxay diirada saari doonaan wax barida ardayda iyo qoysaskooda iyo wixii ku saabsan danaha iyo baahida markaas u baahan yihiin.
Fadlan waxaan kuu xaqiijinaynaa in dugsiyada dadweynaha Minneapolis iskuuladoodu aysan marna uruurin doonin macluumaadka la xiriira xaalada muwaadinimada iyo xaalada socdaalka ardayga iyo qoysaskooda, mana hirgalinayno fulinta sharciyada socdaalka, sidaa darteed wax macluumaad xogg ah ma siin doono hay’adaha dowliga ah. Maxkamada sare ee mareykanka waxay aassaastay in dugsiyada dadweynaha inay u adeegaan dhammaan carruurta oo dhan iyaga oo aan loo eegaynin xaaladaha muwaadinimadooda. Waan soo dhaweynaynaa dhammaan ardaydeena. Fadlan la xiriir maamulaha dugsigaaga hadii aad wax su’aal ah qabtid.